Gawaari u rarnaa Ganacsato Soomaaliyeed oo si nabad ah ku gaaray Xudur | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Gawaari u rarnaa Ganacsato Soomaaliyeed oo si nabad ah ku gaaray ...
Gawaari u rarnaa Ganacsato Soomaaliyeed oo si nabad ah ku gaaray Xudur
Gawaari nooca xamuulka ah oo u rarnaa ganacsato,isla markaana xayirnaa in muddo ah, ayaa gaaray Magaalada Xuddur ka dib howgallo miino sifeyn ah oo ciidamada xoogga dalka ee gobolka bakool ay ka sameeyeen wadada isku xirta Quraxjiime iyo Xuddur.
ciidamada xooga dalka guutada 9 aad qeybta 60 aad ee gobolka bakool ayaa howgal ay ku xaqiijinayaan amaanka wadada ku saneeyey taasoo shacabka ku dhiiragelisey in si kalsooni ah wadada ku maraan.
Taliyaha Ururka 51 aad guutada 9 aad gobolka bakool Deerow Macalin Cabdi ayaa sheegey ujeedada howgalkooda inuu ahaa badbaadinta nafta iyo hantida shacabka,wuxuuna intaasi ku daray in naftooda ay u hurayaan ilaalinta karaamada shacabka soomaaliyeed.
2 maalin ka hor ayeey aheyd markii aa maleeshiyada Al-shabaab ay wadada geliyeen miino waxyeello gaarsiiyay dad shacab ah waxana arintaasi ay abuurtay baqdin laga qabo isticmaala wadooyinka mara meelaha shabaabka ku dhuumaaleystaan.
Maqaal horeShan Macalin oo lagu dilay gobolka Shabeelaha Dhexe + Magacyada
Maqaal XigaQarax miino oo goor dhow ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho